Indonesia in Focus: Waxaan ka fogaadaan oo ay ku jiraan kuwa khasaaray.
Waxaan ka fogaadaan oo ay ku jiraan kuwa khasaaray.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (375)
(Qaybta saddex boqol iyo toddoba iyo shan), Depok, West Java, Indonnesia, September 21, 2015, 21:50 pm).
Marka Qiyaamaha yimaado, markaas ereyga Ilaah ee uu hadalkiisii ku Quraanka, in ay ku habboon yihiin oo ku nool dunida oo dhan, iyo kuwo kale mar walba fasaadinno Dhulka, hunguri helo oo Risqi ah inay had iyo jeer ku gubi kaynta oo istareexa ku keenaya burburinta kaymaha, qiiq roob noolaha waxyeello nolosha, la abuuro deriska amni, naftaada wax dhacaan oo la ismiidaamin ah ama qiiqa (sigaarka), halka digtay ayaa la soo saaray Culamada (ictiqaadsanyahay iyo Muhammadiyah Indonesia Saudi Arabia) go'aansado sigaarka waa arrin.
Sidoo kale ismiidaamin ah oo ah qaab daroogo toosan (daawooyinka / heroin iyo wixii la mid ah), hanjabay Ilaah ka soo noqon doonaa haddii aan si dhakhso ah tuuro Jahannamo.
Waa in aan sidoo kale loo hubiyo in aynu jaarka nahay ay dareemaan ammaan iyo ku noolaan karaan dhinac nala, inkasta oo ay yihiin diimo kala duwan, jinsiga, midabka maqaarka, iyo af ah oo kala duwan iyo quruun kasta. State.
Ustadz Ustadz Ismaaciil Abu Muslim al-Atsari
Dhab ahaantii Nicmada Eebe imtithaal addoomadiisa, kuma koobna. Waxaa ka mid ah raallinimo weyn waa macaan iyo diinta Islaamka. Sidoo kale janjeero istiqomah kor ku xusan iimaanka. Tani waxaa ka muuqata xadiiska hoos ku qoran:
Laga soo bilaabo Sufyan bin Abdullah ATS-Tsaqafi, ayuu yiri: anna waxaan ku idhi, "Rasuulkii Eebe, eray keliya in Anigu waxba weyddiisan lahaa qof kasta ee aad ka dib markii uu ii sheeg in Islaamka!" Waxa uu ku jawaabay: "Waxaad dhahdaa," waxaan ahay Mu'min ah ', markaas istiqomahlah ". [Warbixiyay by Muslim, no. 38; Ahmad 3/413; Tirmidi, ma. 2410; Ibn Majah, ma. 3972].
Taasoo la micno ah ISTIQOMAH
Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah (ku dhintay 795 H) ayaa sheegay, sharxaya macnaha niyo iyo booska uu ka xadiiska adigoo yidhaahda: "Istiqomah waxaa ku raad ah jidka toosane, in uu yahay diinta saxda ah, iyagoon midigta ama xagga bidixda. Iyo istiqomah ka mid ah sameeyo addeecid ku dhashay oo dhan iyo gudaha iyo ka tago oo dhan waxyaalihii la reebay. Tani waxay markaas ka mid noqon doona dhammaan diimaha ah ". 
Xagga sare waxaa la og yahay in le'eg istiqomah tani waa diinta toosan. Daacadnimo waa inaan sameeyo sida amray oo aan marayay xadka, iyada oo aan soo socda waxay doonayaan-hawadooda, inkastoo dadka qabaa waxa ka mid ah sida sawiro ama loo yareeyo. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Markaas istiqomahlah (waxaad sii jid toosan), sida amray, iyo (sidoo kale) kuwa la joogay aad toobad hana ku xadgudbina xadka. Run ahaantii, waa inuu u arkaan waxaad Falaysaan. [Hud / 11: 112].
Sidaa darteed yeedho (diintooda), iyo istiqomahlah (weli diinta ka hor iyo wacdiya) sida faray, hana raacin hawadooda iyaga u gaar ah. Oo waxaad ku tidhaahdaa,.. "Waxaan aaminsanahay in dhammaan buugaagta shaaca ka qaaday Eebe, waxaana lay Faray inaan sameeyo cadaaladda oo idinka mid ah Eebana waa Rabbiganno iyo Ilaah aad noo Wixii camal fallo, idinkana waxaad camal fashaan, waxaa jira muran na dhex jirin iyo aad, Eebe na leh isagaana u meeshii dib (na) "soo ururin doonaa. [Shura / 42: 15].
WADNAHA ISTIQOMAH iyo xubnaha Guddiga
Imam Ibn Rajab al-Hanbali sheegay istiqomah Maamulaha waa istiqomah wadnaha on top of tawxiid, sida ku cad Abu Bakr iyo kuwa kale oo ka dhan ah hadalka Eebe,
Indeed, kuwii odhan: "Eebahanno waa Alle" ka dibna ay istiqomah (adkaynaya ay abuuritaanka "[Al-Ahqaf / 46: 13]..
(Ie) in aanay noqon in ay isaga kasoo hadhay.
Marka beerka ku leeyahay istiqomah kor ku ma'rifah (aqoon) Eebe ka Sokow, khasyah (cabsi) si ay u qaadin Eebe,, waynaysaan, isaga jecel, doonayaa isaga, isaga uun tala saarta, wuu u, aamini kepada- isaga, oo Jeedsada isaga ka sokow, markaas addimada oo dhan sidoo kale istiqomah kor ku addeecsan isaga. Sababtoo ah beerka oo ahaa boqorkii dalka addimada oo dhan merupaka, iyo dhammaan xubnaha jidhku waa ciidan beerka. Sidaas darteed haddii boqorkii istiqomah, ciidanka iyo dadka sidoo kale istiqomah.
Sidoo kale, hadalka Eebe,
Hadapkanlah markaas isagoo sita waji si toos ah u Diinta Eebe -Rûm / 30 paragraph 30 in lagu fasiro by daahiriyaan ujeeddo iyo doonista in Eebe kaliya, isagaana u Wadaagana ma jiro.
Ka dib markii wadnaha, markaas kiiska ugu weyn in sidoo kale hayaa isitqomahnya lagaga hadlo, sababtoo ah waa turjumaan wadnaha iyo whistleblower (content) ee beerka. Sidaa awgeed, ka dib markii uu Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii amar ku istiqomah, dardaaranka si ay u ilaaliyaan afka.
In Imam Musnad Ahmad ka Anas bin Malik, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yidhi:
Diinta anoo addoonkaaga ah aan istiqomah doonaa, si uu istiqomah wadnaha. Markaasuu soo jeediyey qalbigii addoon ee ma noqon doono istiqomah, si uu istiqomah afka ah. Oo qofka oo deriskaaga waa ka nabad dambiyada uu, ma cirka u tegi doonaa. [Warbixiyay by Ahmad, ma. 12636, dihasankan by Shaikh Salim al-Hilali in Bahjatun-Nazhirin, 3/13].
Xusay Tirmidi (no 2407.) Ka Abu Midoowga al-Khudri in marfuu 'iyo mauquf:
Haddii kan ahaa ina Aadan galeen subaxdii yaalaan inta badan addimmadiisa yaase u sheegay in ay afka: "Takwalah Eebe ee dayactirka xuquuqdayada, runtii, waxaan ku xiran tahay inaad Haddii aad istiqomah, ka dibna waxaan sidoo kale istiqomah, haddii aad gilgishaan (oo ka user). Waxa kale oo aanu fido [Tirmidi, ma 2407;.. dihasankan by Shaikh Salim al-Hilali in Bahjatun-Nazhirin 3/17, ma 1521].. 
Samo falku inaad ISTIQOMAH
Istiqomah ma fududa. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah u heli lahaa ruuxa in istiqomah iyagoo ogaanaya eegidda. Eebe adkaade ayaa sheegay in dadka ogeysiiyo eegidda ah oo la gaadhi doono dad istiqomah:
Indeed, kuwii odhan: "Eebahanno waa Alle" ka dibna ay istiqomah (adkaynaya ay booska), ka dibna qaadayso Malaa'igtu iyadoo ka soo dagta, isagoo yiri: "Ha baqina, hana dareemaan murugo, oo waxay ku reyreeyaan la Jannah u yaboohay Eebe idiin" , [Fush-shilat / 41: 30].
Aayaddan kale Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Indeed, kuwii odhan: "Eebahanno waa Alle", ka dibna waxay ku sii istiqomah (abuuritaanka go'an adag ee tawxiidka leh iyo kuwa Fala Camal Fiican) ka dibna waxaa jira cabsi lahayn iyaga oo aan ahayn (sidoo kale) iyo murug midna. Iyagu waa ehlu-Janno, waxayna ku waari dhexdeeda, sida abaal marin wixii ay sameeyeen. [Al-Ahqaf / 46: 13-14].
ISTIQOMAH istighfar BUUXI
Aadanuhu sida xaqiiqada ah waxay leedahay cillado ay. Aadanuhu ma awoodi doonaan in ay fuliso Diinta oo dhan si fiican u. Sidaa imtithaal amray istighfar ka dib markii amar ku istiqomah. Allah Subhanahu wa imtithaal:
Waxaad dhahdaa: "Bal eega, anigu waxaan uun ahay nin aad u eg, lay Waxyooday Aniga in Eebihiin waa Ilaaha Qaadirka ah, ka dibna istiqomahlah (sii jidka toosan) xaggiisa, kana dambidhaaf weydiiso, wuxuuna halaag uga sugnaaday kuwii xidhiidhinaa [Fush-shilat / 41: 6]..
Iman Ibn Rajab yiri: "In hadalka Eebe markaas sii joogo jidka toosan taasoo keentay in isaga iyo Dambi Dhaaf warso ', calaamad u tahay in khasaare lama huraanka ahaa ee (orodka) istiqomah amar ku bixiyay, ka dibna waxaa cusboonaysiiyey la istighfar taas oo u baahan toobadda iyo ruju 'dhinaca niyo ". 
Illeen sababa istiqomah aad u badan. Waxaa ka mid ah sababaha ugu muhiimsan in la sameeyo qof Oogidda Jidka Eebe imtithaal waa sida soo socota:
1. fakaraya Quraanka.
2. diin Eebe.
5. Horumarinta ee iimaanka.
6. shabahaan Salafush-Saalax iyo culimada istiqomah.
7. jecel Eebe iyo Rasuulkiisa ka badan dadka kale.
Wax maxaa yeelay Eebe 8. Love oo waan nebcahay.
9. intestate Mutual ay al-Haq, samir, iyo naxariis.
10. mustaqbalka qanciyaa ee Islaamka.
Halkan sharaxaad yar oo ku saabsan istiqomah, waxaa laga yaabaa in faa'iido leh.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 06 / Year XVII / 1435H / 2014M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
Khasaaraha lagama maarmaanka ah
Qof kasta oo ay doonayaan inay mar walba ku faraxsanahay oo aan marnaba la doonayay murugo xataa daqiiqad. Qof walba ayaa doonaya in uu mar walba dadaal nasiib iyo ugu badnaan si looga fogaado khasaare, laakiin waxa ay ku saabsan in la yidhaahdo, xaqiiqooyinka haddii kale hadlo. Dadka oo dhan ma aha in adduunka oo raba in ay di'i, mararka qaarkood waxa ay si hufan si looga fogaado in xaqiiqo dhab ah oo ay tahay in la aqbalo, qadhaadh. Khasaaraha sii wadaan in ay cudurka daacuunka. Tani xaqiiqada khadhaadh hadlay leh dabeecado kala duwan, laga bilaabo dabeecad xad-dhaaf ah la qabsado ah. Mararka qaarkood waxaa si hufan waa dabeecad ah in lagu dhibtoodo waxyeelo ama cusub, sida ismiidaamin ah - na'ûdzu billâh-, dhaawac hantida, naftooda ku dhaawacmeen ama dhaawacdo qof kale. Laakiin waxaa waxaa sidoo kale wax ka qabashada la dabacsan, oo xawaal iyo samir. Waxa uu ka warqaba in khasaaraha soo gaaray Adduun ma aha khasaaraha kama dambaysta ah, oo aan khasaaro ah in dhibaato weligeed ah ku soo dejin doonaa; Isagu ma aha khasaaro ah ku xusan Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo eraygiisa:
Waxaad dhahdaa, "Run ahaantii, kuwa khasaaray waa kuwa ku dhiba naftooda iyo ehelkooda Maalinta Qiyaame". xusuusnow in sidaas awgeed waa khasaaraha dhabta ah. [Az-Zumar / 39: 15]
Khasaaraha ku xusan qodobka kor ku xusan in khasaaro ah oo aasaasi ah, taasoo keeni doonta in Faraha weligeed ah. Khasaaraha Maalinta Qiyaame, khasaaraha wanaagga aadanaha iyo kuwa sidooda markii miisaamay kafado ugu qurxoonay ku jiraan qish ku jirin innaba. Alle na badbaadin oo dhan laga yaabaa in khasaaraha sida.
Khasaaraha Maalinta Qiyaame waa natiijada falalkeena nolosha dunida. Haddii fursad noolaansho oo loo isticmaali karo oo labada nin ganacsade ah sida oo magaalada ah ugu badnaan isticmaalka isku day ah oo aad u xadidan oo ay ku tari intii macquul ah, markaas Eebe, oo waannu badbaadi doonnaa ka khasaaraha sida.
Ayaa khasaaraha ugu xumaa in dhacdaa qof waa khasaare in dhib uu diinta, sida khasaaraha kuwaas oo u keeni karto dhibaato weligeed ah ee nolosha. Loss saameeya mid cibaadadiisu waa wax musiibada ugu daran qof. Sidaa darteed, inta u dhaxaysa Salaadda Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii waa:
Ma waxaad ka dhigtay masiibo ku diinteena
Waxaa intaa dheer, haddii musiibo on Diinta Jaximo dooxada ee khaa'imiin - na'ûdzu Billah.
Waxaa ka mid ah sifooyinka dadka khasaare iyadoo khasaaraha kama dambaysta ah faab taqi ah ayay u seego fursad nolosha. Wuxuu ha fursad ay simbiriirixan by, si marka dhimashada ugu dambeyntii soo gaaray, samafal kabaikan uu u sameeyey in yar, halka kuwa sidooda u sii kordhaya. Haddii ay sidaas tahay, waxa ay ka adkaan doonaan sidooda ah oo miisaankeedu yahay qolfo leh naxariis. Dadka sidan oo kale, oo ay ku jiraan kuwa khasaaray, sida hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah:
Miisaanku waa Xaq Maalintaas waa runta (yidhi), ruuxii ah oo miisaankeedu yahay qolfo leh naxariis, ay yihiin kuwa ugu nasiibka badan. Oo ku alla kii u qaaddey naxariis iftiin, si dadka naftooda Nacfi. [Al-A'raf / 7: 8-9]
Calaamadaha kuwa khasaaray kale waxaa inta badan Trafford yabooha, samaynta fasaadinno Dhulka iyadoo faafinaysa shaki iyo kicin damaca. Ilaahay wuxuu leeyahay,
(Kuwaasu waxay) kuwa buriya Ballanka Eebe adkayntiisa ka dib markii heshiis uu ahaa shirkadda, iyo go'aan ka gaarto waxa Eebe amray (iyaga) in la xidhiidhiyo oo fasaadiyana ku taal dalka. Kuwaasi waa kuwa Khasaariyey. [Al-Baqarah / 2: 27]
Dadka isku dhiiba oo addeecay inuu kuwa Gaaloobay oo ku siin daacad iyaga oo sidoo kale ka mid ah sifooyinka kuwa Khasaaray. Quraanka waxa uu si adag u digay falalkii keenayey in natiijadan saboolka ah. Maaddaama ay gaalada waxaa isku dayi doonaa in uu inaga dhigo iyaga oo kale. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Kuwa xaqa rumeeyow, haddii aad adeecdaan kuwa gaaloobay, waxay keeni aad dib ugu dib (si Gaalnimo), oo idinna nin oo kan naftiisa u lumiya. [Ali Imran / 3: 149]
Ay ku jiraan kuwa khasaaray maalinta Qiyaame waa kuwa caabudno Alle markii uu helay nimcadii wanaag, markii nolosha raaxo leh, raaxo iyo barwaaqo ama iyada cibaadada Alle markii waxa la qabtay waxa ay noqon kartaa faa'iido ama wanaaggii dhaw. Ilaahay ayaa sheegay,
"Dadka waxaa jira kuwa Caabudi oo Eebe ka adigoo ku laayeen (ma Xukuntay); Sidaas darteed haddii uu helay wanaagga, ayuu weli ku jira xaalad ah in, iyo haddii lagu dhuftay musiibada, waxaa gadaal u noqon. Waxay noqon nasiib darro in adduun iyo Aakhiraba. Kaasi waa khasaaraha dhabta ah. [Al-Hajj / 22: 11]
Khasaaraha ka mid yihiin sidoo kale kuwa la dayacay by Xoolo qoyska iyo si inaydaan caabudin Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Kuwa Xaqa Rumeeyow ha ha Xoolihiinnu iyo Caruurtiinnu waa idin ka shuqlinin xusidda Eebe. Ruuxii saas yeeleen in ay dadka waa uun kuwa Khasaaray. [Al-Munafiqun / 63: 9]
Iyo aayaadkiisa badan oo dheeraad ah qur'aanka ee xuso khasaaray erayga iyo waxyaabaha kuu keena in khasaaraha. Tan waxaa oo dhan si ay u xasuusiyo dadka in aan la dhacay qasaare Maamulka Kililka qaba cawaaqib Aakharaana nolosha.
Ugu dambeyntii, waxaan Allah ka baryaynaa in Ilaaha Qaadirka ah si loo ilaaliyo oo naga khasaaraha sida badbaadiyo.
Sidee aan ka fogaan karno khasaaraha sida? Halkee ganacsi in ay noqon kartaa faa'iido?
Jawaabta ayaa ku tilmaamay in Quraanka la sharaxaad cad oo ka mid ah Quraanka, Surah al-'Ashr.
Aayaddan kale tilmaamay calaamado ganacsi oo aan hubo in la taabtay khasaaraha. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Kuwa xaqa rumeeyow, aad sukakah ma idin tusiyaa ganacsi idinka koriya Cadaab daran karaa? (Ie) Tihiin kuwa Rumeeyey Eebe iyo Rasuulkiisa oo ku jahaaday jidka Eebe xoolahooda iyo naf. Taasi waa idiin khayr roon, haddaad wax ogtihiin. [Ash-Shaff / 61: 10-11]
Kuwa had iyo jeer ka akhrin kitaabka Eebe oo salaadda ooga wax ka nafaqeeya baxay xisbiga Arsuqay ee aannu ugu nicmeeyey qarsoodi iyo caddaanba, ay filayeen ganacsiga in ay leeyihiin wax ay lumiso. [Fatir / 35: 29]
Taasi waa jawaabta. Taasi waa jidka iyo tallaabooyinka la qaadi karo si looga fogaado khasaare iyo faa'ido laga helo. Ruuxii dayaca iyo iska indha jidkii siiyey Eebe Ilaaha Qaadirka ah, luminta ma huraan, oo uu dareemi doonaa qoomamo dhabayseen doonaa. Waxa uu ka xumaan doonaan dhaqankiisa ayaa dhumay samafal oo fursad ah in marnaba mar dambe soo noqon doonaa. Waxa uu ka xumaan doonaan isaga, sida Alle leeyahay oo ku saabsan iyaga waa:
Oo sidaas daraaddeed markii Qiyaame kado ugu timaaddo, oo waxay ku yidhaahdeen, "Waxa aan ka qoomameyn magnitude, dhanka ah dayacaad ku saabsan ugudambaysta!", Inkasta oo ay dhali dembiyadii uu dib. Xasuuso, waxaa Xun waxay u adkaysan. [Al-An'am / 6: 31]
Waxaa laga yaabaa in aan u socdaan in ay noqdaan hanuun Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo had iyo jeer ka heli taufiq Eebe Ilaaha Qaadirka ah baa in wanaag la sameeyo iyada oo la raacayo xeerarka Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
(Waxaa laga soo khudbad ee Sheikh Abdul Bari AST-Tsubaiti in Masjid an-Nabawi, 30 Jumada End 1434 H iyadoo horyaalka ee al-Khasâtul Haqîqiyatu)